काम गर्न नसक्ने ठेक्दार तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन « Khabar24Nepal
मंसिर १०,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्धारित समयमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने ठेकदारलाई तत्काल हटाउन मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/६८ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, “आगामी बैठकमा पनि तिनै ठेकेदारले जिम्मा लिएका तिनै आयोजना पूरा नभएको विवरण सुन्नु नपरोस् । विकास खर्च २० प्रतिशतमात्र हुनु विकासका नाममा तमासा हो ।”
उहाँले तीन वटासम्म ठेक्काको जिम्मेवारी दिन सामर्थ भएका ठेकेदारहरुलाई ५० भन्दा बढी ठे क्का दिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “कुन ठेक्काको अवधि कति छ ? रकम कति खर्च भएको छ ? अब सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ ? लगायतका विवरण आगामी १५ दिनभित्र तयार गर्नुहोस्” उहाँले भन्नुभयो, “धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्नेलाई योग्य ठहर्याउन मिल्दैन । त्यस्तालाई हटाइ अर्काे सक्षमलाई सो ठेक्काको जिम्मेवारी दिनुहोस् ।” उहाँले कानुनअनुरुप ठेक्का पाए नपाएका बारेमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नीति एकातर्फ, बजेट र कार्यक्रम अर्कोतर्फ रहेको प्रवृत्ति औंल्याउदै स्रोत निश्चित नभएका, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका परियोजनामा खर्च गर्ने तथा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन सचेत गराउनुभयो । उहाँले स्रोतको सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्दा वित्तीय समस्या झेलिरहनु परेको तितो पोख्नुभयो । उहाँले सुशासन र विकासमार्फत मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनु सक्नुपर्छ भन्दै सामाजिक, आर्थिक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । याे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।
नम्बर नखुलेको सवारी साधनले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालकको मृत्यु
Brides For Sale – Hot Photography equipment Couples Available for sale
ई-मेल : khabar24nepal2[email protected]